Hetsika JKM2 : Fifadian-kanina ny 30 Janoary 2010 – FJKM Ambavahadimitafo Hetsika JKM2 : Fifadian-kanina ny 30 Janoary 2010 |
Hetsika JKM2 : Fifadian-kanina ny 30 Janoary 2010
Araka ny fandaharan’ny FJKM amin’ny hetsika JKM2 dia hisy ny fifadian-kanina izay hatao ny Sabotsy 30 Janoary 2010.
Ao anatin’izany dia nentanina izay fiangonana afaka mitambatra dia miaramiasa, ka isika ety amin’ny faritra ambony dia manana ny fiaraha-miasa misy eo amintsika 4 trano, izany hoe Ambohitantely, Avaratr’Andohalo, Faravohitra ary Ambavahadimitafo.
Io fifadian-kanina io dia hotanterahina ao amin’ny FJKM Avaratr’Andohalo amin’ny 9 ora ka hatramin’ny 4 ora. Hisy fandaharam-potoana mandritra io tontolo andro io ka hanana anjara manokana amin’izany isika.
Koa entanina isika fa ny fifadian-kanina dia efa nampianarin’i Jesoa, ka na Izy aza naharitra 40 andro, 40 alina mba hanamafisana ny fifandraisana teo Aminy sy ny Rainy. Ary isika koa dia ampianarina ho amin’izany fifadian-kanina izany mba hampitombo ny fiainam-panahintsika amin’izao fanarahantsika ny Tompo izao.